PressReader - Isolezwe: 2018-06-15 - Umculi uhlaba indaba yobambo
Umculi uhlaba indaba yobambo
Isolezwe - 2018-06-15 - IZINDABA - MCEBO MPUNGOSE noKWANDOKUHLE NJOLI
ZINSUKU ezifana nosuku lobaba yizo ezikhumbuza amadoda ngokubaluleka kwawo emndenini nasemphakathini.”
Lawa ngamazwi adluliswe ngumculi ophinde abe ngumdidiyeli osesebenzisane nabaculi abaningi endimeni yezobuciko.
UMondli Ngcobo ube nengxoxo neSolezwe ngokubalululeka kosuku lobaba oluzoba ngeSonto.
“Kubalulekile ukuthi sike sithole usuku lwethu nathi njengobaba. Obaba nabo bayadinga ukubongwa ngothando abalukhombisayo, ukusebenzela imindeni yabo nokuyivikela. Bakhona obaba abangalungile kodwa labo abenza kahle, kuhle ukuthi babungazwe,” kusho uMondli.
Lo mculi onendodana uNani Ngcobo eneminyaka emibili uthe into asayifundile ngokuba ubaba kule minyaka, ukuthi kubalulekile ukuthatha indawo yakho zisuka.
“Abantu besifazane babuye babe novalo ikakhulukazi uma ingane ike yagula, kumele uhlale ukhona uzomqinisekisa ukuthi ingane izophila nokuthi angakhathazeki kakhulu,” kuqhuba yena.
Njengoba izigameko zokubulawa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane kuleli kungenye yezinkinga ezibhekene nezwe, uMondli uthe indaba iqala ekhaya.
“Inkinga iqala endleleni abantu besilisa abakhuliswa ngayo ekhaya. Ngaphezu kwalokho enye into okumele iphele yile nto yokuzitshela ukuthi umuntu ungowakho nale nto yokuthi ‘ungowami’. Le nto ‘yobambo lwami’ nayo kumele iphele ngoba idala izinkinga kubo bobabili abantu besilisa nabesifazane,” usho kanje.
Uthe ukuze sehle isihlava sokubulawa kwabantu besifazane, abantu besilisa kumele bafunde ukwamukela uma abesifazane becela ukuhlukana nabo ngoba akekho umuntu ophethe omunye.
“Abantu besifazane nezingane bayizipho eziphuma eNkosini, ngakho isipho kusuke kungesona esakho kusuke kuyinto ephuma kuMdali akekho umuntu ongalawula umuntu oyisipho esiphuma eNkosini ngoba usuke engasiyena owakho.”
Uthe kuhle ukuthi obaba bake babungazwe babe nosuku ngoba isikhathi esiningi omama ababa namaholidi amaningi. Uthe abantwana bayayishintsha indlela wena ozibona ngayo njengomuntu wesilisa.
“Ngezinye izikhathi izinto ezifana nomsebenzi kuyalehlisa izinga lakho lokuzethemba kodwa uma ufika ekhaya kukhona umuntu okholelwa ukuthi uyiqhawe, obukela kuwena, othembeke kuwena, Lokhu kuyalinyusa izinga lokuzethemba.”
UMondli uzobe egubha usuku lobaba nomndeni wakhe ekuseni ngaphambi kokuthi ayosebenza ntambama.